नेपाल बैंकको चरम लापरबाही : ६ तोला सुन बैंकबाटै गायब ! - Nayabulanda.com
प्रनिश थापा २१ पुष २०७५, शनिबार १२:५७ 443 पटक हेरिएको
चितवन : के तपाईं बैंकमा सुनचाँदी गहना राखेको छु भनेर ढुक्क त हुनुभएको छैनन् ? यदी त्यसो हो भने सचेत हुनुहोस् । तपाईंको सामान सुरक्षित नहुन पनि सक्छ । हो, नेपाल बैंक गितानगर शाखाका कर्मचारीको चरम लापरवार्हीका कारण गितानगर निवासी खगराज पाठकको झण्डै करिब ६ तोला बढी सुन गायब भएको छ ।
१ वर्ष अगाडी बैंकमा सुन राखेर १ लाख ४५ हजार नगद पैसा निकालेका पाठकको १ वर्ष पछाडी सुनको समय अवधि थप गर्न जाँदा खाताबाटै सुन हराएको पाइएको हो । आफुले बुझ्दै जाँदा त्यहाँका सुन कर्जाका कर्मचारीले आफ्नो खातामा रहेको सुन अर्कैको खातामा टान्सफर गरेको जानकारी पाएको पाठकले बताए ।
साथी सुनको ब्याज तिरी पुनरिन्यु गर्न बैंक गएको र सोही बेला साथीकै नाममा बैकका कर्मचारीले खाता खोली सो सुन उनकै खातामा टान्सफर गरेको हुनसक्ने शंका पाठकले गरेका छन् । आफुलाई बैकका कर्मचारीले सुन लगेको भनेर जवरजस्ती हस्ताक्षर गर्नुस भनी दवाव दिएको समेत पाठकको गुनासो छ ।
आफ्नो कुनै हस्ताक्षर र आफुलाई जानकारी बिना नै त्यत्रो सुन बैकबाटै हराउनु सुन कर्जाका कर्मचारी सुजन कोईराला र बैकको नै चरम लापरवाही भएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैङ्कद्वारा पुनर्कर्जा कार्यविधि स्वीकृत, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तत्काल २ खर्ब ऋणको बाटो खुल्यो
माङसेबुङ गाउँपालिकामा वडाको बजेट सिलिङ ५० लाख